Babaleke bashiya izithunzi abaphathi kufika amalungu eSadtu emahhovisi | News24
Babaleke bashiya izithunzi abaphathi kufika amalungu eSadtu emahhovisi
Durban - Kubaleke izikhulu zoMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal kwavalwa amahhovisi azo ngesikhathi kugasele amalunga eSouth African Democratic Teachers' Union.
Le nyunyana ifike kula mahhovisi efuna kukhishwe isikhulu esisolwa ngenkohlakalo.
Lesi sikhulu esisebenza ehhovisi lezisebenzi zomnyango wezemfundo singabonwa kwazise kubikwa ukuthi sincinzwe indlebe kwathiwa singalinge siwubeke umcondo waso emsebenzini ngoba kukhona okusina kusijeqeza.
Isekela likanobhala weSadtu eDurban South Region, uNkk Xoli Msomi, lithi kwakhona ukuqashwa kwalesi sikhulu - esiligodlile igama laso - ehhovisi lezezisebenzi zomnyango wezemfundo bekungekho emthethweni.
"Lo muntu uhlukumeza amalunga ethu, sesibonile ukuthi ukufika kwakhe ehhovisi ubezolwa izimpi zakhe. Sibize umqondisi womkhandlu wesifunda uMlazi samtshela ukuthi akukho okuzoqhubeka emahhovisi uma le ndoda ingahambile lapha," kusho uNkk Msomi. Okunye okuvelile wukuthi kunezimali zothisha ezibanjwayo ngenxa yaso lesi sikhulu kodwa ezingaziwa ukuthi zishonaphi.
Umthombo weLANGA uthi okuningi obekungahambi kahle emahhovisi omnyango bekudalwa yisona lesi sikhulu ngoba besinamandla.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthi lesi sikhulu ngeke sisasebenzela eTruro House ngenxa yolaka lwezisebenzi zomnyango. U
thi okwamanje sizonikezwa umsebenzi wokubheka ukusebenza kwemikhandlu yabazali ezikoleni. Utshele leli phephandaba ukuthi lesi sikhulu besinikezwe umsebenzi wokubheka ukusebenza kothisha, sibagade kukhona konke abakwenzayo kubalwa nokulova kwabo bese sikhipha isinqumo.